के सामाजिक सिग्नल एसईओ सुधार गर्ने?
सामाग्री सिर्जनाकर्ताहरू र अनलाइन मार्केटरहरू निरन्तर रूपमा नयाँ तरिकाहरूको खोजीमा छन् जुन एसईओ पद खोज इन्जिनहरूको पहिलो पृष्ठमा चलाउनका लागि।. रोचक कुरा यो हो कि जब सम्म उनि Google शीर्ष 10 मा पुग्छ, उनि अझै पनि आफ्नो स्थिति को बनाए राखन को लागि नियमित आधार मा ताजा र मूल्यवान सामाग्री उत्पन्न गर्न को आवश्यकता हो.
तथापि, वेबसाईट मालिकहरूलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि उत्कृष्ट सामग्री उत्पादन गर्न पर्याप्त छैन. राम्रो सामग्रीलाई आवश्यक प्रमोशन चाहिन्छ. सामाजिक पहुँचलाई अधिकतम गर्नको लागि अन्य सामग्रीहरूमा तपाईंको सामग्री प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
आइपुगेको छ: जब हामी लेख, ब्लग पोष्टहरू, ई-पुस्तकहरू, उपयोगी सेतो कागजातहरू वा इन्फ्रागोग्राफीहरू लेख्नुहुन्छ, उनीहरूले हाम्रा लक्षित दर्शकहरूको सामनेमा सबैभन्दा राम्रो तरिका सोशल मिडिया मार्फत छ.
भन्नु भएको जस्तो, साझेदारी गर्नु हो. यो सामाजिक संकेतहरू, साथसाथै सोशल मिडियालाई इन्कार गर्न गाह्रो छ, एसईओमा महत्त्वपूर्ण असर पार्छ. सेमील्ट विशेषज्ञहरूले पूर्णतया इनबाउंड मार्केटिङ गुरु जे बियरको बयान संग सहमत छन्, जसले एक पटक भने कि यो सामग्री आगो हो, र सोशल मिडिया पेट्रोल हो।.
सामाजिक एसईओहरू कसरी मेरो एसईओ रेटिङ् बढाउन मद्दत गर्न सक्छु?
1. सामग्री साझेदारीको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुहोस्
तपाईको साइटमा थप ट्राफिकलाई ड्राइभ गर्न पहिलो कुरा भनेको प्रयोगकर्ताले तपाईंको सामाग्री सोशल मिडिया मार्फत साझेदारी गर्न यो सुविधाजनक बनाउनु हो।. यदि सम्भव छ भने, आगन्तुकहरूलाई तपाईंको URL लाई फेसबुक पोष्टमा प्रतिलिपि गरी टाँस्न नदिनुहोस्. प्रायजसो पाठकहरूसँग समय र नगर्ने धैर्य छ. नतिजाको रूपमा, तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्तालाई खराब प्रयोगकर्ता अनुभवको कारण प्रबर्धन गर्ने अवसर गुमाउनुहुनेछ.
ध्यान दिनुहोस, जब तपाइँ तपाइँका आगन्तुकहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई तपाइँको सामग्री साझेदारी गर्न सजिलो बनाउनुहुन्छ, उनीहरूले तपाइँका पोष्टहरू आफ्नो सामाजिक समुदायहरूको साथ साझेदारी गर्न सम्भावित छन्, तपाईंको साइटमा थप रेफरल ट्राफिक उत्पन्न गर्दै.
2. तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू फरक पार्नुहोस्
ब्याकलिङ्कहरू अन्य स्रोतहरूबाट तपाईंको वेब पेजमा आउने लिङ्कहरू हुन्. पृष्ठ, रैंकिंग गर्दा Google, याहू, र बिंग सहित सबै खोजी इञ्जिनहरू यी ब्याकलिङ्कहरूको मात्रा र गुणस्तरमा विचार गर्दछ।. बस राख्नुहोस्, एक पृष्ठमा धेरै उच्च-गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू उच्च खोजी रैंकिङ प्राप्त गर्दछन्. अधिक छ भने, यदि विश्वसनीय वेबसाइटहरु बाट पाठकहरु लाई तपाइँको साइट मार्फत क्लिक गर्दै छन् भने, खोज इन्जिनहरूले लिंक, सूचकांक सामाग्री को अनुसरण गर्नेछन्, र तपाईंको सामाग्री अनुसार तदनुसार श्रेणीबद्ध गर्नेछ।.
3. तपाईंको साइटको लागि मोबाइल साझेदारीको अनुकूलन गर्नुहोस्
2017 मा, मोबाइल, सामाजिक, र स्थानीय मार्केट प्रभावको मिश्रण एसईओ जस्तै कहिल्यै. यी दिनहरू, अधिकांश व्यक्तिहरूले ल्याप्टप भन्दा भन्दा बढी मोबाइल फोनहरू खोज्छन्. तिनीहरू अनुसन्धान र जाने मा किन्न चाहन्छन्. खोज इन्जिनले उच्च-स्तरको साथमा मोबाइल अनुकूलित स्रोतहरूको मूल्यांकन गर्छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइटको मोबाइल संस्करणले तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्न आगन्तुकहरूलाई सजिलो बाटो प्रदान गर्दछ.
ती साइट मालिकहरू जसले तिनीहरूको स्थानको लागि धेरै स्थानहरू र स्थानीय ल्यान्डिङ पृष्ठहरू राखेका छन्, उनीहरूको वेबसाइटमा क्लिक-मार्फत र सोशल संकेतहरू कसरी अनुकूलन गर्ने भन्ने बारे सोच्ने आवश्यकता पर्दछ।. यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने माथिल्लो खोजी स्तरहरू असर गर्ने मुख्य पक्षहरू छन्.
अन्तिम तर कम्तीमा कम्तीमा केहि कुरा सोही प्रमाण हो जुन तपाईंको लेख, ब्लग पोष्टहरू, र यूट्यूब भिडीयोहरू देखाउँछन् भनेर देखाउँछन् कि उनीहरूले मूल्यवान र विश्वसनीय छन्।. शब्द सामाजिक प्रमाण विषय सामग्री विशेषज्ञहरूबाट समीक्षा, टिप्पणी, र उद्धरण जस्ता तपाईंको सामग्रीलाई बुझाउँछ. सामाजिक प्रमाणले निम्न कार्य गर्दछ: यदि व्यक्तिले देखाउँछ कि सैकड मानिसहरूले तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्दै छन्, तिनीहरू यसलाई जाँच गर्न र यसलाई साझेदारी गर्न निषेध गरिनेछ। Source .